MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA DOOXADA BULLDOG DOG - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Dooxada Bulldog Dog
Roxy jiilka koowaad (F1) Dooxada Bulldog (Boxer / English Bulldog mix) da'da 2 sano
Feedhyahan / Ingiriis Bulldog Eydo leh xariiqyo qaarkood oo saafi ah
(Bull-Boxer = waxa naadiyada isku dhafan qaarkood ugu yeeraan iskutallaab fudud oo Ingiriisiga Bulldog ah oo ku socota Boxer)
Dooxada Bulldog waxay u ekaan kartaa nooc ka dheer an Ingiriis Bulldog ama nooc ka gaaban Feedhyahan . Si kasta oo ay xaaladu noqon karto, eeyga noocan ah wuxuu leeyahay muruq, dhisid adag, madax balaaran, qoor qaro weyn, iyo laab iyo garab aad u ballaaran. Indhuhu way wareegsan yihiin oo sanka ayaa si dhab ah loogu riixaa sida Ingiriiska Bulldog ama wuxuu u soo baxaa waxoogaa yar sida Feerka. Dhegaha waa qaab ubax ama boodh. Cagaha waa dhumuc weyn oo adag. Waxay ama leedahay guntin gaaban, yar ama dabo aad u yar. Midabbada waxaa ka mid ah gogol kala duwan, cadaan leh gogol ama wixii isku dar ah ee gogosha, madow, caddaan, cagaar, cows ama casaan. Dooxada Bulldogs waxay leeyihiin ilko iyo daaman aad u xoog badan waxayna yeelan karaan qaniinyo yar ama xad dhaaf ah.
Dooxada Bulldog waxay leedahay dabeecad aad u fiican oo marka si habboon loola dhaqmo, leh milkiile fahmaya sida loo noqdo a hogaamiyaha xirmada , waxay la jaan qaadi kartaa dhammaan noocyada kale eeyaha iyo aadanaha (dadka waaweyn iyo carruurta). Waxay noqon kartaa mid aad u deggan oo debecsan oo si lama filaan ah u dhaqma runtii nacasnimo iyo ciyaar. Waxay jeceshahay inay ku faanto oo ay jeceshahay inay ka ag dhawaato milkiilayaasheeda aadanaha. Dooxada Bulldogs waa kuwo caqli badan waxaana si fudud loo baran karaa waxyaabo badan. Waxay guriga ka sameeyaan waardiyeyaal aad u fiican waxayna ku qaylinayaan dhawaqyada aysan aqoonsanayn. Waxay jecel yihiin inay raacaan darawalada gaariga! Tani waa eey aad u xoog badan. Sida dhammaan noocyada noocyada mastiff, Dooxada Bulldog waa inay lahaataa a milkiilaha xukuma yaa bixin kara jimicsi ku filan . Midkee bixin kara eyga xeerarka waa inay raacdaa iyo hoggaan ay si dabiici ah ugu baahan tahay inaad isku dheelitirnaato, si looga fogaado midkoodna dabeecadaha aan loo baahnayn .
Dhererka: 12 - 25 inji (31 - 64 cm)
Miisaanka: 50 - 125 rodol (23 - 57 kg)
16 - 25 inji oo dherer ah, 18 - 24 inji qoorta.
Feejignaan weyn waa in la siiyaa si loo ilaaliyo laalaabka maqaarka wejiga aad u nadiif ah oo qalalan, iyo sidoo kale laalaabka maqaarka ee aagga dabada. Meelahan ayaa aad ugu nugul infekshinka haddii aan maalin kasta la nadiifin. Waxay umuuqdaan inay u janjeeraan inay yeeshaan cuncun maqaarka ah iyo falcelin xasaasiyadeed. Dooxada 'Bulldog' oo aad u culus ayaa dhibaato noqon karta haddii aan cunugeeda si sax ah loola socon. Qaar ka mid ah Dooxada Bulldogs waxaa laga yaabaa inay dhibaato ku qabaan neefsashada, iyadoo kuxiran sida loogu riixo sanka. Marmarka qaarkood way khuuraan oo waxay noqon karaan kuwo jilicsan mararka qaarkood. Drool badanaa dhibaato maahan ilaa eeyga kuleylka xad dhaafka ah la kulmo ama haddii uu sugayo daaweyn gaar ah.
Dooxada Bulldog uma baahna wax badan oo bannaan oo guriga gudihiisa ah maxaa yeelay ma ahan nooc ballaaran. Way ku fiicnaan kartaa guri dabaq ah ama hool. Si kastaba ha noqotee, waa mid firfircoon gudaha mararka qaarkood. Waxay noqon doontaa mid xoogaa dhaawac ah mararka qaarkood waxayna ku socotaa duufaan yar oo degdeg ah, oo ku wareegsan guriga sida waalan. Macno malahan inta uu le eg yahay gurigaagu, wali wuu sameyn doonaa. Weerarku wuxuu socon doonaa oo keliya daqiiqado, markaa jidka uun ka bax oo eeygaagu ha ordo. Waa wax qosol badan in la daawado. Eeyahaani waa inaan looga tagin banaanka dhaxanta ama kuleylka xad dhaafka ah. Waa inay ku seexdaan guriga gudihiisa.
Dooxada Bulldog waxay ubaahantahay jimicsi maalinle ah, oo ay kujirto socod dheer . Iyagu waa eeyo aad u jimicsi badan maxaa yeelay waxay leeyihiin Boxer iyaga dhexdooda si kastaba ha noqotee, ha iloobin inay iyaguna ku jiraan Ingiriis Bulldog sidoo kale, sidaa darteed qaar ayaa u muuqan kara wax yar oo jahwareer ah. Waxay u ordi karaan sida deerada, si kastaba ha noqotee, markay u baahdaan inay gaabiyaan, maahan waxa ugu fadliga badan. Waxay u egtahay taangi xawaare sare ku socon kara. Waxay jecel yihiin xoogaa wanaagsan, oo calalinta cunnada aaminka ah ee iyaga u gaar ah iyo meel ay si xor ah uga baxaan hoggaanka aag aamin ah. Iyagu waa calalinyaal aad u xoog badan, sidaa darteed waa loo baahan yahay qalab adag oo adkeysi leh.
Koodhka jilicsan ee jilicsan ayaa leh dhogor gaaban oo ay fududahay in la daryeelo. Dooxada Bulldog waxay u baahan tahay in la cadeeyo ama la shanleeyo mar kasta, isla markaana laga yaabo in lagu tirtiro maro qoyan. Uma baahna qubaysyo marar badan hadday runti wasakh yeeshaan mooyee Laalaabka maqaarka ee wejiga, dabada, caloosha iyo xubinta taranka (dheddigga) waa in si aad ah loo nadiifiyaa oo loo qalajiyaa maalin kasta. Hubso in dhammaan aaggagani ay gebi ahaanba qalalan yihiin socodka roobka ama qubayska, haddii kale way ku dhici doonaan cudurka. Dooxada Bulldog waa celcelis daadiya.
Dooxada Bulldog ayaa la sheegay inuu asal ahaan ka soo jeedo dooxada Annapolis, Nova Scotia, Canada, iyadoo u bixisay magaceeda 'Valley Bulldog.' Khadkiisa ayaa waxaa ka mid ah Feedhyahan iyo Olde Ingiriis Bulldogge ama Ingiriis Bulldog waxaana dib loo raadsan karaa bartamihii 1900-naadkii. Waxay caan ku tahay agagaarka Nova Scotia, Canada, aagga. Qaar ka mid ah khadadka Dooxada Bulldog ayaa si saafi ah u tarmaya qaab iyo nooc labadaba, halka kuwa kale ee wax soo saaraana ay tarmayaan iskutallaabooyin fudud oo Boxer-to-Bulldog ah iyaga oo ugu yeeraya Dooxada Bulldogs. ACHC iyo DDKC, si kastaba ha ahaatee, waxay ugu yeeraan Feeryahankii ay la gudbeen Bulldog Bull-Boxer.
ACHC = Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Dibi-Feeryahan
DDKC = Naqshadeeyaha Eeyaha Keena Neefta = Dibi-Feeryahan
'Buck waa jiilkii ugu horreeyay (f1) Dooxada Bulldog (Bulldog / Boxer mix). Wuxuu ku saabsan yahay 24 'marka la engegayo iyo 80 lbs. waana 2 1/2 sano jir sawirkan. Isagu waa eeygii ugu jacayl iyo dhaqan wanaagsanaa ee aan abid arko, laakiin waxaan u malaynayaa inaan yara eexanahay. Isaguba waa qof caqli badan, maadaama uu fadhiisan karo, jiifsan karo, is rogi karo, ruxin karo (bidix ama midig amar ahaan), hadli karo oo istaagi karo. Haddii uu maqlo waxaad heleysaa cunto fudud wuu imaan doonaa isaga oo sameeya howsha oo dhan. Buck waa astaanta eeyga wanaagsan. '
Buck (bidix bidix), jiilkii ugu horreeyay (F1) Dooxada Bulldog (Bulldog / Boxer mix) oo ay weheliyaan asxaabtiisa asbuucyada 6
Winston waa sharaf 60-lb. Valley Bulldog oo ka yimid Nova Scotia, Canada, oo lagu muujiyey halkan markuu jiro 3 sano.
Obi the Bulldog oo jira 11 bilood jir— 'Obi waa goofteyda yar ee goof !! Had iyo jeer faraxsan oo jecel eeyaha kale iyo dadka kale, laakiin wuu adkaan karaa markuu daalana. '
Chico dooxada Bulldog oo ka socota Nova Scotia
'Tani waa Big Bubba. Isagu waa 5-toddobaad jir ah eey Bulldog (Ingiriis Bulldog / Boxer mix) oo ku dhashay halkan. Waxaan hayaa hooyadiis, aabihiis iyo walaashiis ka weyn. Waxaan la wadaagay sawirkan sababtoo ah waxaan u maleynayay inuu yahay tusaale caan ah oo ku saabsan isugeynta. Isagu waa yar roly-poly oo wuxuu leeyahay shakhsiyad aad u jilicsan. Waxaan daawadaa Cesar Millan marar badan. Waxaan ku fuliyaa farsamooyinkiisa tababbar badan aniga oo leh 'xirmo' eey ah. Runtii waxaan aaminsanahay inaysan jirin wax sida eey xun oo kaliya milkiilaha jaahil ah. Waxaan gurigeenna ku haysannaa 12 eey dhammaantoodna waa xubno muhiim ah oo ka tirsan qoyskeenna. '
Chico Valley Bulldog oo ka socota Nova Scotia oo ah arday yar
Eeg tusaalooyin badan oo ku saabsan Dooxada Bulldog
Valley Bulldog Sawirada 1
Dooxada Bulldog Valley 2
Dooxada Bulldog Valley 3
Dooxada Bulldog Valley 4
Valley Bulldog Sawirada 5
cairn terrier chihuahua mix puppy sale
lhasa apso muqisho isku darka poodle
nuujinta eyda 3 toddobaad jir ah
shukulaatada shukulaatada leh indhaha jaalaha ah
lafaha cas ee coon hound hound